काठमाडाैं | बैशाख ४, २०७८
काम विशेषले विद्यार्थी पुस्तक भण्डार जाँदा प्रकाशन प्रालिका शान्त गौतमसित भेट भएको थियो हालैको दिन । यसअघि नाम निकै सुनेको भए पनि प्रत्यक्ष भेट हुन सकेको थिएन उनीसित ।
नाम जस्तै शान्त स्वभाव र मिजासिलो व्यवहार रहेछ उनको । करीब आधा घण्टा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो चियाको चुस्कीसँगै । आउने बेला एउटा पुस्तक दिँदै भने – हालै प्रकाशित पुस्तक हो, पढ्नुहोला काम लाग्न सक्छ ।
हेरें, ‘नेपाल विद्या’ नामक पुस्तक रहेछ मित्र केदार वाशिष्टले लेखेका । निकै चर्चित पुस्तक भए पनि यसअघि पढ्ने साइत जुरेको थिएन । साधुवाद दिँदै घर आएर पढ्न शुरू गरें ।
पुस्तक मोटो, औसत ठूलो साइजमा ४१८ पेजको, विषय खँदिलो । एकसरो पढेर सक्नै ४ दिन लाग्यो मलाई ।
यस वर्ष प्रकाशित पुस्तकमध्ये निकै चर्चा पाएको पुस्तक हो यो । सायद बिक्रीका हिसाबले पनि अग्रपंक्तिमै पर्नुपर्छ । १ हजार २०० प्रति छापेको थिएँ आधा जति सकियो भनेका थिए प्रकाशक गौतमले त्यतिबेलै ।
पुस्तकमा २ खण्ड छन्, सिद्धान्त खण्ड र प्रयोग खण्ड । सिद्धान्त खण्डमा ६ अध्याय छन्, जसमा विद्या र ओलोजी, विधागत आधारमा देशीय विद्या, देशीय विद्या अध्ययनका रूपमा विद्या, देशीय विद्याका सैद्धान्तिक आधार, नेपाल विद्या र सैद्धान्तिक पर्याधार पर्छन् ।
प्रयोग खण्डमा २ भाग रहेका छन्, नेपाल विद्या प्रयोग १ र प्रयोग २ । ‘लुम्बिनी र कपिलवस्तुको राजनीतिक उत्खनन्’ र प्रयोग दुईको ‘सिला खोजेको भाषा’ विवेच्य विषय हुन् क्रमशः यी दुईका ।
लेखक केदार वाशिष्ठ पेशाले पत्रकार हुन् । लामो समयसम्म हामी २ सँगै थियौं गोरखापत्रको सेवामा । उनी कुशल पत्रकार हुन् भन्ने थाहा थियो तर कुशल लेखक पनि रहेछन्, यति गहन पुस्तक लेख्दा रहेछन् भन्ने कुरामा भने ‘छुपेरुस्तम’ लागे मलाई । तर यसको पनि पटाक्षेप भइसकेको छ अब ।
केदार वाशिष्ठ वास्तवमा केदार भट्टराई हुन् । उनको प्रशासनिक नाम यही छ तर आलेखहरूमा केदार वाशिष्ठको नामले चिनिने गरेका छन् । पुस्तकमा पनि सोही नाममा आएका रहेछन् । भट्टराईहरू वाशिष्ठ गोत्रीय हुन्, वाशिष्ठ ऋषिका सन्तान । यसैका आधारमा वाशिष्ठ लेख्ने गरेका होलान् सायद ।
पुस्तक निकै गहन छ, पूरा अनुसन्धान पद्धतिमा आधारित तर केही क्लिष्ट हुन पुगेका छन् सूत्रात्मक हुनाले । सम्भवतः पीएचडी थेसिस अनुसन्धानको छाप परेकाले पनि त्यस्तो भएको हुनुपर्छ, जसको संकेत लेखक आफैंले गरेका छन् पुस्तकै शुरूतिर ।
पुस्तकको उद्देश्य महान् छ, क्षेत्र व्यापक । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रपे्रमले ओतप्रोत त्यत्तिकै । समग्रमा नेपाल हेर्ने आँखीझ्याल भन्नु उपयुक्त ठानेको छु मैले । राष्ट्रियतालाई शिरमा राखेर लेखिएका पुस्तक प्रायः यस्तै हुन्छन् । नेपाल र नेपाली भाषाको उत्पत्तिदेखि विकाससम्म र नेपाल तथा नेपालीको वैभव र विशेषतालाई पिँधैसम्म पुगेर उत्खनन् गरिएको छ पुस्तकमा । पाद टिप्पणीद्वारा विषयवस्तुको पुष्ट्याइँ अर्को विशेषता हो यसको । छानीछनी भएका छन् विषयवस्तुको उठान र तौलीतौली प्रयोग भएका छन् शब्दहरू ।
सरसर्ती पढ्दै जाँदा २ विषय सर्वाधिक महत्त्वका लागे मलाई । प्रथमतः राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय वैभवलाई सम्यक ढंगले चिनाउने काम गरेको छ भने दोस्रो कुरा पुस्तक कसरी लेखिन्छ, लेख्नुपर्छ, एउटा पुस्तक लेख्न कति पढ्नुपर्छ भन्ने कुराको राम्रै सन्देश दिएको छ यसले । साथसाथै टेबुल गफलाई आधार मानी उडन्ते तर्कका आधारमा पुस्तक लेख्ने प्रकृति र प्रवृत्तिलाई चुनौती पनि ।
नेपालको भूगोल, भाषा, साहित्य आदि तमाम पक्षको उठान र विकास शृंखला सूत्रात्मक रूपमा माला बनेर उनिन पुगेका छन् । प्रसङ्ग अनुसार विश्वका अन्य भाषा र तिनका प्रभावबारे पनि धेरथोर उल्लेख भएका छन् उस्तै गरी । नेपाली भाषामा प्रयुक्त विदेशी शब्दको स्रोत संकेत भेटिए पनि ती कसरी आए भन्ने थाहा पाइन्न शब्दकोषहरूमा तर त्यसलाई समेत छर्लङ्ग पारेको छ यसले । तब न विद्या, तब न नेपाल विद्या । नत्र के विद्या ? के नेपाल विद्या ?
पुस्तकका सबै प्रकरण उम्दा छन्, त्यसमा पनि लुम्बिनी र कपिलवस्तुको राजनीतिक उत्खनन् ज्यादा उम्दा मानेको छु मैले । अहिले पनि बुद्धको जन्म भारतमा भएको हो, बुद्ध जन्मस्थल भारतमा पर्छ भन्ने जस्ता अनर्गल प्रलाप बरोबर सुनिने गरेको छ भारतीय मिडियाहरूमा । बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा पर्छ भन्ने कुरा उत्खनन्बाट भौतिक रूपमै प्रमाणित भइसक्दा पनि भारतीय शासकहरू यदाकदा बर्बराउन छाडेका छैनन् अझै यसबारेमा । त्यस्ता कुत्सित मनासायका निम्ति पुस्तकले गतिलो झापड दिएको छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।
यहाँनेर थप्न के मन लागेको छ भने यस्तो पुस्तक नेपाली भाषामा मात्र लेखेर पुग्दैन । उनीहरूकै भाषामा वा विश्वभाषा अंग्रेजीमा पनि अनुवाद आवश्यक छ, ताकि उनीहरूका पनि आँखा परुन् यसतर्फ । सायद यसबारे लेखक आफैंले पनि सोचेका होलान् । सामान्य आशयसम्म व्यक्त गरेको हुँ मैले । हो, लुम्बिनी र कपिलवस्तु सम्बन्धी प्रकरण यति गहन छ कि यसको छुट्टै पुस्तक हुन सक्थ्यो । किन एउटै पुस्तकमा जबरजस्ती तानित पुग्यो भन्ने कुरा भने बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ । आशा गरौं यसको पुष्टि लेखकबाटै हुनेछ ।
पुस्तकमा केही कमीकमजोरी पनि छन् जस्ता लागे मलाई । जसको चर्चा नगरे पनि हुने हो तर लागेको कुरा नभन्दा पुस्तक र स्वयं लेखकप्रति नै अन्याय हुन्छ जस्तो लागेकाले केही कुरा उठाउने धृष्टता गरेको छु । वैदिक ज्ञान सप्तसिन्धु उपत्यकातिरबाट गंगा उपत्यकासम्म फैलिएको आशय व्यक्त भएका छन् यहाँ तर वेदको पहिलो मन्त्र प्राकाट्य भएको स्थान नै कौशिकी प्रश्रवण क्षेत्र हो । ऋग्वेदको पहिलो मन्त्रका द्रष्टा ऋषि विश्वामित्र पुत्र मधुच्छन्दा हुन्, जो यसै क्षेत्रका निवासी मानिएका छन् । ऋग्वेद तृतीय मण्डलका द्रष्टा ऋषि महर्षि विश्वामित्र र वैश्वामित्र कूल नै हुन्, जो कौशिकी क्षेत्रकै निवासी मानिएका छन् । पाँचौं मण्डलका द्रष्टा ऋषि महर्षि अत्रि तथा आत्रेय कूल हुन्, जो खप्तड क्षेत्रका निवासी मानिएका छन् । सातौं मण्डलका द्रष्टामा महर्षि वाशिष्ठको नाम आएको छ, जो, देवघाट क्षेत्रका निवासी मानिएका छन् । महर्षि कश्यपको पनि थुप्रै सूक्त छन्, जुन ऋग्वेदका विभिन्न मण्डलमा छरिएर रहेका छन् । अर्घाखाँची आसपासका निवासी मानिएका छन् उनी पनि ।
हो, यस्ता कुरा बोल्न प्रमाण चाहिन्छ । प्रमाण विना बोलिँदैनन् तर प्रमाणकै कुरा गर्दा पनि योगी नरहरिनाथ, प्रा.डा. विष्णुराज आत्रेय, मदनमणि क्षिदित आदि विद्वान् आफैंमा कम्ता प्रमाण होइनन् । यसको अर्थ वैदिक मन्त्र उता देखिएका थिएनन् भन्ने होइन । उता पनि देखिएका छन्, यता पनि देखिएका छन् र अन्ततः एउटै सरोवरमा सरोवर भई समग्र आर्यावर्त (पश्चिममा इरान, उज्वेकिस्तान, ताजकिस्तानदेखि पूर्वमा ब्रह्मदेश म्यानमारसम्म र उत्तरमा त्रिविष्टव (तिब्बत) मानसरोवरदेखि दक्षिणमा सिंहल द्वीप श्रीलंकासम्म) ओतप्रोत हुन पुगेका छन् वैदिक सभ्यताबाट ।
अर्को कुरा शुद्धाशुद्धिसित सम्बन्धित छ । एकाध अक्षर, मात्रा छुट्नु, टुटफुट हुनु, उल्टोपाल्टो पर्नु सामान्य कुरा हो यति ठूलो ग्रन्थमा तर कतिपय अवस्थामा एउटै अक्षर छुटले पनि निकै फरक पार्छ । बुद्धले घरबार त्यागेको उमेर बारेमा भ्रम पर्‍यो । १९ वर्षको उमेरमा घरबार त्यागी २५ वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए भन्ने उल्लेख छ पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्यायको ‘भारतीय दर्शन’ नामक पुस्तकमा तर २९ वर्षको उमेरमा बुद्धले घरबार छाडेका थिए भन्ने उल्लेख भेटिन्छ यहाँ ।
‘कुनै पनि अनुसन्धानमा फुहरर भेटिउन् भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ’ भन्ने उल्लेख छ पुस्तकमा (पृष्ठ १५२¬) । तर भेटिउन् नभई नभेटिउन् भन्ने शब्द माग गरेको छ प्रसङ्गले, जसले अर्थको अनर्थ गराइदिएको छ । यसबारेमा भने आगामी संस्करणमा लेखकको ध्यान जानु मनासिव देखेको छु ।
केही कमीकमजोरी बाहेक पुस्तक अब्बल छ । लर्तरो जोश, जाँगर, लगन र साहसले यस्तो ग्रन्थ तयार हुँदैन, हुनै सक्दैन । यसका लागि केदारजी जस्तै कर्मठ व्यक्ति अघि सर्नुपर्छ, यस्तै कर्मठ व्यक्तिको हात र साथ चाहिन्छ ।
अन्त्यमा यति भनौं – लेखक पीएचडी अनुसन्धान छाडेर यता आएको कुरा थाहा पाउँदा ज्यादै खुशी लाग्यो । किनकि यसलाई पनि यस्तै भएको छ । विश्वविद्यालयको किस्ताबन्दी बोली र अपारदर्शी व्यवहारका कारण पीएचडी अनुसन्धान छाडेर लेखन क्षेत्रमा लागेको हो पंक्तिकार पनि तर जे भएछ राम्रै भएछ । आफूले पीएचडी गर्न नसके पनि आफैंले लेखेको किताब ‘दर्शन भित्रको दर्शन’ अहिले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको पीएचडी अनुसन्धानको पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएको देखिएको छ । यस पुस्तकको पनि अवस्था एक दिन यस्तै हुनेमा विश्वस्त छु ।